IFM Analakely :: Nanatosaka ny kanto ho an’ ny mpankafy ry Kristel • AoRaha
IFM Analakely Nanatosaka ny kanto ho an’ ny mpankafy ry Kristel
Tovovavy mpanakanto misongadina amin’ny fitendrena ny gitara beso i Christel Ratri, izay niofo ho Kristel, ankehitriny. Nosantarin’ity Andriambavilanitra mitrandraka ny mozika ity ny « Un jour, un artiste », sehatra vaovao an’ny Institut français de Madagascar (IFM) Analakely, tamin’ny sabotsy teo. Nizara roa ny hetsika.
Natomboka tamin’ny “Kristel sy ny tontonlony” ,nahitana fampirantiana sary, fandefasana horonantsary, ary fihaonana mivantana ny fotoana, ny tolakandro. Nampiasaina avokoa ny toerana sy ny fitaovan’ny IFM mba hanasongadinana an’i Kristel sy ny tariny. Nitohy tamin’ny fampisehoana ny hetsika ny hariva.
Natosak’i Kristel sy ny tariny teny an-tsehatra avokoa ny tsara indrindra tany aminy tamin’ny alalan’ny feony maranitra noravahin’ny firaondraonan’ny gitara beso. Nahaliana ny mpijery koa ny angola sy ny ranitra niangalian’i Benkheli, tamin’ny gitara marani-peo. Tsy latsa-danja tamin’izany anefa ny angovo sy ny dona noentin’i Andry Sylvano, tamin’ny fidobohana ny amponga maroanaka.
Tsy honjohonjon’izy telo irery anefa ny fampisehoana. Nanampy azy ireo tamin’ny fanafanana ny lanonana ireo mpanakanto namany, toa an-dry Tambours Gast, Xtah, Judith, Harivola, Rybota, Tasha, Rapadango, Tsiry Kely Panda, Silo, Tsanta ary Loharano. Nibahana kokoa, nandritra ny seho, ireo hira voarakitra ao anatin’ilay rakikira “Irony” satria fotoana nampahafantarana voalohany ny vokatra ihany koa ny lanonana.
Festival FESPACO :: Horonantsary malagasy enina hifaninana any Burkina Faso